September 6, 2019 - ThutaSone
ဘဏ်တွေပြိုလဲ သွားနိုင်ခြင်းရဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်း
September 6, 2019 ThutaSone 0
ဘဏ်တွေပြိုလဲ သွားနိုင်ခြင်းရဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်း စီးပွား​ရေးလုပ်​ငန်​းရှင်​ကြီးဖြစ်​တဲ့ ကျ​နော်​့ဆရာသမား တစ်​​ယောက်​ မ​နေ့ညက ဖုံးဆက်​လာတယ်​… ဘဏ်​ထဲမှာ​ငွေရှိရင်​ ထုတ်​ထားလိုက်​​တော့တဲ့…. သူ့ကိုလဲ သူ့ဆရာက ​ပြောလာတာ။ အ​ကြောင်​းရင်​း​တော့မသိဘူးတဲ့…. နဲနဲ​တော့လန်​့သွားတယ်​။ ဘာလုပ်​ရမလဲမသိဖြစ်​သွားတယ်​။ ​ဘဏ်​ထဲ​ငွေရှိလို့​တော့မဟုတ်​ဘူး။ တီးတိုး တီးတိုး နဲ့ ​ကောလဟာလ​တွေ အဲ့​လောက်​ထိ ဖြစ်​​နေလား​ပေါ့… အကြီးကြီး​တွေက​နေ […]
ဒေါက်တာမြဝတ်ရည်အား ဝန်ကြီးသမီးဒေါ်နှင်းစံပယ်အောင်ကို တရားဝင်တောင်းပန်လိုက်ပြီ… ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်က ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါက်တာမြတ်ဝတ်ရည်က စာပို့တိုင်ကြားစာ ပို့လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း… သူမ၏ လူမှုကွန်ရက်တွင် ရေးသားလိုက်ပြီး မကြာမီအချိန်တွင် သာယဉ်ဝန်ကြီးသမီးမှ သူမ၏ လူမှုကွန်ရက်တွင် တရားဝင် ရေးသားတောင်းပန်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ခရက်ဒစ်
ရန်ကုန်သားတွေ “ဟိုက်” ကနဲ ဖြစ်သွားစေမယ့် မန္တလေးရဲ့ ပြောင်းလဲမှု နောက်တခု
ရန်ကုန်သားတွေ “ဟိုက်” ကနဲ ဖြစ်သွားစေမယ့် မန္တလေးရဲ့ ပြောင်းလဲမှု နောက်တခု မန္တ​လေးမြို့က​တော့ ထပ်​ခါထပ်​ခါ ချီးမွမ်​းရပြန်​ပြီ ဘုရားရင်​ပြင်​​ပေါ်မှာ သန်​့ရှင်​း​ရေး ကားတဲ့ဗျာ… မဟာမြတ်မုနိ ဘုရားကြီး….မရောက် ဖြစ်တာ လပိုင်းလောက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်…ပြုပြင် ပြောင်းလဲ တိုးတက်မှုတွေကတော့ များစွာ….တိုးတက်မှုများစွာ ထဲမှာတော့…ဒီ သန့်ရှင်းရေး ယာဉ်ငယ် လေး […]
နေပြည်တော် ဒက္ခိဏခရိုင်ဒုတိယခရိုင်တရားသူကြီး ဦးညိုဌေး၏ နောက်ဆုံးခရီး
“ဗစ်တိုးရီးယားလေးအမှုကိုင် နေပြည်တော် ဒက္ခိဏခရိုင်ဒုတိယခရိုင်တရားသူကြီး ဦးညိုဌေး၏ နောက်ဆုံးခရီး” Friday, September 6, 2019 ဦးနှောက်သွေးကြေးပြတ်ပြီး သေဆုံးသွားတဲ့ နေပြည်တော် ဒက္ခိဏခရိုင်ဒုတိယခရိုင်တရားသူကြီး ဦးညိုဌေး နာရေးကို ၄င်း၏ ဇာတိ ဝက်လက်မြို့နယ် သရက်ချိုကျေးရွာတွင် ယနေ့ နေ့လယ်က ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ” သူ့အမေကြီးက အသက် […]
ရေဘေးသတိပေးချက်ရေလှောင်တမံ (၃၇) ခု ရေပိုလွှဲမှ ရေကျော်နေ၍ထုတ်ပြန်သတိပေးချက်
ရေဘေးသတိပေးချက်ရေလှောင်တမံ (၃၇) ခု ရေပိုလွှဲမှ ရေကျော်နေ၍ထုတ်ပြန်သတိပေးချက် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည် နယ်ရှစ်ခုရှိ ရေလှောင်တမံ ၃၇ ခုတွင် ရေပိုလွှဲမှ ရေကျော်နေပြီး လတ်တလော မိုးကောင်းနေသော မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသရှိ ရေလှောင်တမံများအနီး နေထိုင် သူများသည် ရေဘေးအထူးသတိ ပြုနေထိုင်ရန် ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအရင်းအမြစ်အသုံးချမှု စီမံ ခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနက […]
ဝန်ထမ်းတွေကို“အလုပ်နဲ့ မိသားစုယှဉ်လာရင် မိသားစုအရေးကို ဦးစားပေးပါ”လို့ မှာကြားလိုက်တဲ့ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် သူဌေးမ
ဝန်ထမ်းတွေကို“အလုပ်နဲ့ မိသားစုယှဉ်လာရင် မိသားစုအရေးကို ဦးစားပေးပါ”လို့ မှာကြားလိုက်တဲ့ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် သူဌေးမ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးအနေနဲ့ ဘာပဲပြောပြော ကိုယ်အခကြေးငွေပေး ငှားရမ်းထားတဲ့ ဝန်ထမ်းက အလုပ်ပြီးမြောက်တာကို လိုချင်ပါတယ်။ တချို့ အရမ်းတွက်ကပ်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေကျတော့လည်း သူတို့ကိုယ်တိုင်အပါအဝင် ဝန်ထမ်းတွေကိုပါ မိသားစုကို နောက်မှာထား၊ အလုပ်ဆိုမှ အလုပ်ဖြစ်စေချင်နေတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် […]
ရုတ်တရက်အခေါက်ရွှေစျေး (၁) ကျပ်သား ကျပ် (၄) သောင်းကျော်ကျဆင်း
ရုတ်တရက်အခေါက်ရွှေစျေး (၁) ကျပ်သား ကျပ် (၄) သောင်းကျော်ကျဆင်း အခေါက်ရွှေစျေး (၁) ကျပ်သား ကျပ် (၄) သောင်းကျော် ရုတ်တရက်ကျဆင်း၊ ဒေါ်လာစျေးပါ လိုက်ကျဆင်း။ စစစ က စောင့်ကြည့်နေကြောင်းပြောကြားအပြီး ၂၃နာရီအကြာ ထိုသို့သောဖြစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်… ရန်ကုန်၊စက်တင်ဘာ ၆ ရက် (နေ့လယ် ၂နာရီ […]
ပြည်သူများ ဘဏ်ကိစ္စအပေါ်မစိုးရိမ်ကြရန် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ မှာကြားထား
ဘဏ်ကိစ္စအပေါ် ပြည်သူများ မစိုးရိမ်ကြရန် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ မှာကြားထား စက်တင်ဘာ ၆ – လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသည့် ဘဏ်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူများအနေဖြင့် စိုးရိမ်ပူပန်မရှိစေရန် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က. မှာကြားပြောဆိုလိုက်ကြောင်း အုတ်တွင်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ချိုချို ကပြောသည်။ ” နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မှာကြားချက်ကတော့ ဘဏ်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ […]
ရန်ကုန်မြိုလမ်််းဘေးဈေးသည််အား အခွွန်မကောက်နိုင်၍ နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာ ဘီလျံံ ချီဆုံးရှုံးနေဟု ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန််ဆိို
လမ််းဘေးဈေးသည်အား အခွွန်မကောက်နိုင်၍ နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာ ဘီလျံ ချီဆုံးရှုံးနေဟု ဆိို ရန်ကုန်မြို့တော်စည််ပင်သာယာရေး ကော်မတီအနေဖြင့် လမ်းဘေးကျူးကျော်ဈေးသည်နှင့် ကား ပါကင် ကြေးကို ကောက်ခံရခြင်း မရှိသည့်အတွက် ဘဏ္ဍာငွေ ကျပ် ဘီလျံချီ ဆုံးရှုံးနေရကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စည်ပင် သာယာရေး ဝန်ကြီး ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ဦးမောင်မောင်စိုးက ပြောသည်။ […]
သုံးညပဲ လိမ််းလိုက် ကြွေရုပ််လေးလိုဖြစ်သွားစေရမယ်် ခုပဲလိမ်းလိုက်နော် ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ သုံးည လိမ်းရုံနဲ့ မင်းသမီးလေးတစ်ပါးလို တောက်ပတဲ့ အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်စေမယ့် နည်းလမ်းလေးကို ပြောပြချင်ပါတယ်ဒါကတော့ Vitamin E ကို အဓိကသုံးပြီး အသားအရေထိန်းသိမ်းတာပါ။ မိတ်ကပ်လိမ်းစရာမလိုဘဲဲ သဘာဝအလှကို အားလုံးလိုချင်ကြမှာပါ မင်းသမီးလေးရဲ့ အသားအရေမျိုး လိုချင်နေသူ ကောင်မလေးတွေအတွက် […]